Fampidirana ny fitsipika famokarana sy ny fampiharana ny horonantsary Iridescent
Sarimihetsika Iridescent dia fitaovana fanaingoana plastika vaovao sy haitao avo lenta. Fitaovana famokarana manana halavirana mihoatra ny 20 metatra mitsoka moramora ny vatan'ny plastika mangarahara, ary avy any amin'ny faran'ny hafa dia misy horonan-tsarimihetsika miloko avana miloko. Mampiasa ny fitsipiky ny interferenca maivana ...
Fametahana hainganana mafana sy fizotra mangatsiaka
Ny haitao fanaovana hajia ankehitriny dia mizara ho nohitsakitsahana mafana sy fitombenana mangatsiaka. Teknolojia fanaovana haingon-trano mafana dia manondro ny famindrana ny foil mankany amin'ny vodin-tany amin'ny alàlan'ny fanamainana sy fanerena ny foil amin'ny takelaka fametahana vy mafana manokana; Ary ny teknolojia fanidiana mangatsiaka dia manondro ny fomba fampiasana ...
Inona no azon'ny sarimihetsika fikandrana Dichroic entina aminao
FANAMPINY FANAMBARANA FANAMPINY Ny sarimihetsika miova loko mamirapiratra dia vita amin'ny pre ...